Hey DAN: Sida Codka CRM uu u Xoojin karo Cilaaqaadkaga Iibka oo uu kuugu ilaalin karo miyir-qabka | Martech Zone
Waxa jira shirar aad u badan oo lagu xidhi karo maalintaada oo aan ku filnayn wakhti aad ku duubto dhibcaha taabashada qiimaha leh. Xitaa ka hor masiibada, kooxaha iibka iyo suuqgeyntu waxay caadi ahaan lahaayeen in ka badan 9 shirar dibadda ah maalintii oo hadda leh gogosha gogosha fog iyo isku-dhafka ah ee shaqeynaya muddada fog, tirada shirarka casriga ah ayaa kor u kacaya. Haysashada diiwaanka saxda ah ee shirarkan si loo hubiyo in cilaaqaadka la kobciyo oo xogta xiriirka ee qiimaha leh aan la lumin waxay noqotay hawl adag oo waqti badan qaadata, taasina waa meesha codka CRM xalalka ay ku iibsan karaan wakhti, taageeraan jiilka hogaanka iyo ilaalinta tamartaada.
Hey DAN Codka caawiyaha CRM
Cod ku socda kaaliyaha CRM haye DAN u gudbiya shirarka iyo kaydinta tafaasiisha xidhiidhka iyo kulan qaadashada si aan kala go 'lahayn xogta CRM. A Fortune 500 jecel, kaaliyaha codkani wuxuu la shaqeeyaa CRM kasta, oo ay ku jiraan Salesforce, Dhaqdhaqaaqa MS, Iyo Hubspot. Waxay wanaajisaa korsashada CRM, waxay kordhisaa tayada xogta in ka badan 200%, waxayna bixisaa celcelis ahaan 4-6 saacadood wiiggii wakhtiga iibka dheeraadka ah. Hadafka lagu hagaajinayo aragtida macmiilka iyo baabi'inta culayska maamulka, waxay leedahay shaqaynta abka iyo borotokoolka amniga adag si ay isla markiiba u qabato qoraalada shirarka, kaararka ganacsiga, abaabulo dabagalka iyo maaraynta kharashyada.
Sidee Codka Ku-CRM u noqon karaa Saxnimada Hey DAN Taageerada Jiilka hogaanka?
Xaqiijinta in dabagal lagu sameeyo qofka saxda ah wakhtiga saxda ah iyo kooxaha wax iibinta ay ku hubaysan yihiin sirta saxda ah ee asalka ah, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyada iibka ee guuleysta. haye DANCilmi-baaristu waxay muujineysaa in haddii wakiilka iibku uu sugayo hal maalin ka hor inta uusan gelin qoraallada kulanka nidaamka CRM, ilaa 40% faahfaahinta ka-qaybgalkaas waa lumay. Si loo xoojiyo kooxaha wax iibinta si ay u sameeyaan waxa ugu fiican, dhisidda iyo xoojinta xidhiidhada faa'iidada leh, gelitaanka xogta CRM ee saxda ah iyo wakhtiga ku habboon waa muhiim. Codka ilaa CRM software wuxuu bixiyaa xal degdeg ah oo sax ah.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, kullanka adeegyada qorista ee xog uruurinta CRM waxay ka guureen gabi ahaan hawlihii agabka bini'aadmiga ee ku aaddan caawiyayaasha robotka. Waxa xiiso leh, in kasta oo ay ku cusub yihiin ciyaarta, bots-yadani waxay sidoo kale awoodaan inay sameeyaan heerar sax ah oo cajiib ah.
Waxaan aragnay codka iyo saxnimada CRM oo si aad ah u soo hagaagaysa labadii sano ee la soo dhaafay, iyadoo heerka khaladku uu hoos uga dhacay 19% 2019 ilaa 12% sanadka 2021 Hubi in khaladaadka qoraalka wax soo saarka la yareeyo ilaa 1% - isku dhafkan xoogga leh waa sababta shirkadaha Fortune 500 ay nagu kalsoon yihiin. Guurka tignoolajiyada dadka waa isku dheelitirnaanta ugu fiican ee u dhexeeya waxtarka iyo saxnaanta.
Kate Zeid, Kobaca & Hawlgallada SVP ee Hey Dan
Dhammaan wakhtigan kaydinta iyo qabashada xogta saxda ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu sawiro sawir cad oo rajada ah iyo qalabaynta kooxaha wax iibinta si ay u qaataan hab ka dhan ah xiritaanka heshiiska. Xogta xoogga leh waxay u horseedi kartaa isku-xirno sixir ah, sida aqoonsiga xogta asymmetry ee u dhexeeya waxa macmiilku rabo inuu barto iyo waxa kooxda iibku ka ogtahay alaabta. Waxay awood u siin kartaa kooxuhu inay qiyaasaan sida diiran ee hogaamintu oo ay dib ugu hawl galaan wakhtiga saxda ah iyo habka ugu fiican. Falanqaynta xogta ee miisaanku waxay sidoo kale horseedi kartaa in la ogaado isbeddellada baahida macaamilka iyo ogeysiinta wareegga xiga ee horumarinta alaabta ama adeegga.
Dhismaha Kooxda Iibka
Kooxda iibku waxay noqon kartaa caqabad, warshado badan oo iibka shaqaaluhu wuxuu noqon karaa wax ka yar 2 sano. Waxa barbar socda maaraynta madax xanuunka shaqaaleysiinta beddelka hawl-wadeenka xooggan, waa wadne xanuunka laga yaabo inay lumiyaan xidhiidhada macaamiisha oo ay dhisteen muddo ka dib iyo kharashka ka iman kara inay lumiyaan ganacsigooda.
Xusuusinta xogta saxda ah iyo kuwa qotodheer ee kulanka ayaa fure u ah qorsheynta isku xigxiga. Adigoo hubinaya in faahfaahinta kulanka macaamilka, laga bilaabo tirooyinka heshiisyada suurtagalka ah ee lagu heshiiyey Zoom ilaa xusuusta in loogu hambalyeeyo aasaasaha sannad-guurada ganacsiga, la dejiyo isla markiiba oo si cad xogta CRM ee aad si guul leh u xaqiijisay mustaqbalka xidhiidhkaas.
At haye DAN Codkayaga barnaamijka CRM waxa uu qoray in ka badan 1 milyan oo shirar, oo ka dhigan in ka badan 620,000 oo daqiiqo oo maqal ah. Bixinta xusuusta hay'adaha iyada oo u gudbinaysa xog caqli-gal ah labada kooxood ee Fortune 500 iyo dharka ganacsi ee yaryar, waxay xaqiijisaa sii wadida xiriirka oo ugu dambeyntii waxay kicisaa iibka.
Hubinta software ku habboon CRM, haye DAN, waxa ay yarayn kartaa wakhtiga lumay ee dib u soo celinta tafaasiisha shirarkii tirada badnaa ee soo baxay intii lagu jiray maalin aad u dhib badan. Waxa kale oo ay dhiirigelinaysaa in codkan isbeddelaya ee tignoolajiyada CRM ay si joogto ah u wanaajiso rikoorkeeda saxda ah ee saxda ah, iyada oo algorithms ay sii wadaan inay xiraan farqiga u dhexeeya xusuusta aadanaha iyo awoodda bot.
Boosso Hey DAN Demo Maanta
Tags: CRMhubsashoHub Spot CRMHubspot is dhexgalkadhexgalkajiilka ledDhaqdhaqaaqa msms dynamics dhexgalkafarsamaynta luqadda dabiiciga ahnlpkooxaha iibkaiibiyaha xoogga crmisdhexgalka iibkacod ilaa crmcod qoraal ah
ZoomInfo: Ku Dardargeli Dhuumahaaga B2B Xogta Shirkadda Adeeg ahaan (DaaS)